ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်
ပြည်ပတွင်ဖုန်း အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု
Roaming Partner များနှင့် Roaming ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုနိုင်သော နိုင်ငံများ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ တယ်လီနောမှ အကောင်းဆုံး Roaming ဝန်ဆောင်မှုတွေကို သင့်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခရီးသွားနေစဉ် အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဖို့ အသက်သာဆုံး နှုန်းထားများနဲ့ တယ်လီနောမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်။ သင်ခရီးသွားကာနီး အကောင်းဆုံးအကြံပေးမှုတွေကိုလိုအပ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Useful Tips တွေကိုကြည့်ပါ သို့မဟုတ် Call Centerဖြစ်တဲ့ ၉၇၉ သို့ခေါ်ဆိုပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ တခြားနိုင်ငံကို ရောက်နေတယ် ဆိုရင်တော့ +၉၅ ၉၇၉ ဝဝ ၉၇၉ ဝဝ ကိုခေါ်ဆိုပြီးမေးမြန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်ခမှ ပေးရန်မလိုပါ။ တယ်လီနော၏ SIM အားလုံးတွင် နိုင်ငံခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့ Service (IR) ဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဝန်ဆောင်မှုများကို ပိတ်ထားလိုပါက ၉၇၉ သို့ ဆက်သွယ်ပြီး ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
တယ်လီနော၏ SIM အားလုံးတွင် နိုင်ငံခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့ Service (IR) ဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ထားလိုပါက ၉၇၉ သို့ဆက်သွယ်ပြီး ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
တယ်လီနောရဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို အာရှ၁၂နိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုသလိုပဲ ၁MB ကို ၁၀ကျပ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ မှတ်ပုံတင်ကြေး ၅၉၉ ကျပ်ဖြင့် တစ်ပတ်စာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အာရှ၁၂နိုင်ငံတွင် မူလဈေးထက် ၉၉.၉၄% ပိုမိုသက်သာစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
အာရှ ၁၂ နိုင်ငံ
ဒေတာ/ MB နှုန်းထား (ပုံမှန်)
၂၄ နာရီကို ၉၉ ကျပ်သာကျသင့်မယ့် ဒေတာ/MB အစီအစဉ် (ပရိုမိုးရှင်းဈေးနှူန်း)
သုံးသလောက်ပေး ဒေတာ/ MB (ပရိုမိုးရှင်းဈေးနှုန်း)
ဗီယက်နမ် ၉၀၀ ကျပ် ၉၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၃၀၀ ကျပ် ၇၀၀ ကျပ်
၁၀ ကျပ် ၁၅ ကျပ်
ကမ်ဘောဒီးယား ၉၀၀ ကျပ် ၉၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၃၀၀ ကျပ် ၇၀၀ ကျပ်
ထိုင်း ၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၂၀၀ ကျပ်
မလေးရှား ၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၂၀၀ ကျပ်
တရုတ် ၉၀၀ ကျပ် ၉၀၀ က်ပ္ ၁,၅၀၀ ကျပ် ၃၀၀ ကျပ် ၇၀၀ ကျပ်
စင်္ကာပူ ၉၀၀ ကျပ် ၉၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၃၀၀ ကျပ် ၇၀၀ ကျပ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၂၀၀ ကျပ်
ပါကစ်စတန် ၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၂၀၀ ကျပ်
အင်ဒိုနီးရှား ၉၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၃၀၀ ကျပ် ၇၀၀ ကျပ်
အိန္ဒိယ ၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၂၀၀ ကျပ်
ဖိလစ်ပိုင် ၉၀၀ ကျပ် ၉၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၃၀၀ ကျပ် ၇၀၀ ကျပ်
လာအို ၉၀၀ ကျပ် ၉၀၀ ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၃၀၀ ကျပ် ၇၀၀ ကျပ်
ဥရောပ ၁၄ နိုင်ငံ
*979*2*5*4#သို့ ခေါ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်ကို ရယူလိုက်ပါ။
ဂျာမနီ ၁,၀၀၀ ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၄၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ်
မွန်တီနီဂရိုး ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ်
ရှရှား ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ်
ဆားဘီးယား ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ်
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ၁,၀၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၄၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ်
ပြင်သစ် ၁,၀၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၄၀၀ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ်
ဆွီဒင် ၅၀၀ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၂၀၀ ကျပ်
အီတလီ ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ်
နော်ဝေ ၅၀၀ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ကျပ် ၂၀၀ ကျပ်
နယ်သာလန် ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ်
ဒိန်းမတ် ၅၀၀ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ကျပ် ၂၀၀ ကျပ်
ဖင်လန် ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ်
ဟန်ဂေရီ ၅၀၀ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ကျပ် ၂၀၀ ကျပ်
ဘူလ်ဂေးရီးယား ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ်
Afghanistan Albania Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Australia Azerbaijan Bahamas Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bhutan Bosnia and Herzegovina Brazil British Virgin Islands Brunei Bulgaria Cambodia Canada Cape Verde Cayman Islands China Cook Islands Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Egypt Estonia Finland France Gabon Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guernsey Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kuwait Kyrgyzatan Laos Latvia Lebanon Liechtenstein Luxemburg Macau Malaysia Maldives Mali Malta Malta Mauritius Micronesia Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nepal Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russia Saint Kitts and Nevis Saint Vincent and the Grenadines Sao Tome and Principe Saudi Arabia Serbia Sierra Leone Singapore Slovenia Solomon Islands South Africa South Korea Spain Sri Lanka St. Lucia Sweden Switzerland Taiwan Tajikistan Telenor Maritime Thailand Timor Leste Tunisia Turkemenistan Turkey Turks Caicos UAE UK Ukraine USA US Virgin Islands Uzebekistan Vietnam Zambia Zimbabwe
-All Service (Postpaid&Prepaid)-4G/4G LTE/3G roaming available.
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 1200 Ks 500 Ks 15000 Ks per MB 3G
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) 2000 Ks
Call other countries 2500 Ks
receive all calls 1000 Ks Free
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 1200 Ks 500 Ks 15000 Ks per MB 4G LTE/3G
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) 900 Ks
Call other countries 1500 Ks
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) 500 Ks
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 1200 Ks 500 Ks 500 Ks per MB 4G LTE/3G
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 500 Ks 100 Ks 500 Ks per MB 4G LTE/3G
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 1000 Ks 400 Ks 500 Ks per MB 3G
receive all calls 500 Ks Free
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 1200 Ks 500 Ks 500 Ks per MB 3G
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 500 Ks 100 Ks 15 Ks per MB 3G/ 4G
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) 1000 Ks
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 1200 Ks 500 Ks N/A 3G
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 1000 Ks 400 Ks 2500 Ks per MB 4G LTE/3G
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 1000 Ks 400 Ks 8000 Ks per MB 3G
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 5000 Ks 1000 Ks 15000 Ks per MB 3G
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) 5000 Ks
Call other countries 5000 Ks
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 10000 Ks 1000 Ks 15000 Ks per MB 3G
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) 10000 Ks
Call other countries 10000 Ks
Send Local Call - callalocal number (fix or mobile) 1000 Ks 500 Ks 500 Ks per MB 3G
** Local Number = Number from the country where you are roaming
Example : if you roam in Thailand - local number is Thai Number (+66xxxx)
နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေရင်ကော မိမိရဲ့ တယ်လီနောဖုန်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
သင်ဟာ တယ်လီနောမြန်မာရဲ့အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သင်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံက တယ်လီနောမြန်မာရဲ့ ကွန်ယက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဘယ်အော်ပရေတာတွေနဲ့ မိမိရဲ့ တယ်လီနော SIM ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ?
သင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပါ။ အပေါ်က ဇယားထဲမှာ ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Roaming အသုံးပြုနေတုန်း အဝင်ဖုန်းလက်ခံမှုတွေအတွက် ပိုက်ဆံပေးစရာလိုပါသလား?
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်ရော ဖုန်းလက်ခံမှုအတွက်ပါ ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ဖုန်းပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အခိုးခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့ကို အကြောင်းကြားရပါမလဲ?
တယ်လီနောရဲ့ Customer Care Team ကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
နယ်စပ်နေရာသို့ (ဥပမာအားဖြင့် တမူးမြို့၊ မူဆယ်မြို့၊ မြဝတီမြို့၊ တာချီလိတ်မြို့ ) နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ရောက်ရှိနေသူဖြစ်ပါက တခြားနိုင်ငံ၏ ကွန်ယက်တွင် အသုံးပြုမိပြီး Roaming နှုန်းထားဖြင့် ကျသင့်နိုင်သဖြင့် အခြားနိုင်ငံ၏ ကွန်ယက်တွင် Roaming ဝန်ဆောင်မှုကို မတေ
- Roaming ဝန်ဆောင်မှုကို ပိတ်လိုပါက 500 သို့ ROAM OFF ဟု စာတိုပေးပို့နိုင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်လည် ရယူလိုပါကလည်း 500 သို့ ROAM ON ဟု စာတိုပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။